Ngolunye usuku ngamunye wethu waphawula ukuthi kukhona ubuhlungu kancane umunwe. Namuhla - ubuhlungu yinto yesikhashana bese cishe imperceptible, kusasa - ukubekezela isithwathwa, kodwa ebangela ukungakhululeki, futhi 2-3, isibonelo, ukusebenzisa i uzwane ukuze isinyathelo yimpandla akunakwenzeka. Okufanele ukwenze, sizoyaphi ngubani ukucela usizo? Ubuhlungu ukhumbuza yena ngomzuzwana. Kodwa konke lokhu besingagwemeka uma nesikhathi esanele sokuthatha isinyathelo.
Ngaphambi ukwabelana izindlela ukuqeda ubuhlungu obunjalo, kubalulekile ukuba ngihlole izizathu kungani run up umunwe wakho ingalo noma umlenze. Futhi isizathu - yavama. Phela, kufanele kuphawulwe ukuthi ithumba aliveli ngokwa futhi ngesicelo sakhe. Kumelwe nakanjani babe enhlekeleleni. Futhi hhayi nje ukulimala, futhi umonakalo omkhulu wokubhoboza noma ukutheleleka.
Ngokuvamile, futhi ngokuvamile ukusebenzisa yamelana umunwe ngesikhathi ubulili bubuhle. Ikakhulukazi labo abakhetha ukwenza ukuzimonyonga babo emakhaya, kunokuthembela nokucwala. Ngakolunye uhlangothi, abesifazane ukwenza okufanele. Phela, gumbi kungenziwa eziqhutshwa noma ezingasebenzi manicure onguchwepheshe noma inobudlabha, okuyinto akufanele kube ukuhlanzeka emsebenzini wakho, asipheli ecacile futhi ingasebenzi magciwane of manicure amathuluzi. Ayikho salon ehloniphekile akuvumeli ukuthi esebenza amaklayenti ayo. Ngakolunye uhlangothi, ngokuvamile run up umunwe futhi emva manicure, kwenziwe uchwepheshe.
Akukhona nje nail manipulations kuholele abscesses ezingalweni nasemilenzeni iminwe. Abesilisa nabo abatholanga izinkinga ezifanayo. Ngokwesibonelo, emsebenzini, ngephutha uphethe izwibela ngaphansi cuticle, bavale izindlela ngokurhaba. A izwibela wadonsa, kodwa inqubo nilimaza - hhayi ukuyichaza. Eksodusi - isobala: ithumba futhi ubuhlungu.
Nokho, ubunjalo ukubukeka abscesses ecacile, futhi manje - impendulo yombuzo main: kanjani ukuba zilulame? Heal ithumba umunwe wakhe nje, yebo, uma ithumba ongakabi waqala kakhulu kodwa ayidingi wenziwa nodokotela ohlinzayo. Londoloza okugeza elula ngosawoti. I ashisayo (hhayi abilayo) amanzi kufanele usawoti ukubeka (e isilinganiso 1 isipuni sikasawoti slide ingilazi yamanzi). Ngaphezu kwalokho wehlise umunwe lesiguli noma uzwane emanzini ashisayo bese ikhuphuka. Yiqiniso, umunwe wokuqala aphansi futhi uyigcine njalo ngamanzi abilayo - kunzima futhi babulawa. Ngakho-ke, ngemaminithi ekucala ekutholeni emathileyi umunwe kuvunyelwe nje ngokuqhubekayo bacwilisa emanzini usawoti. Futhi lapho amanzi epholisa phansi kancane, kudingeka uyekethise umunwe ngokuphelele bese ugcine ngaphandle kokuthatha isikhathi eside kangaka, kuze nosawoti cool. Ngemva le nqubo, qiniseka ukusonga umunwe ahlanzekile ngebhandeshi oyinyumba ngebhandeshi alengayo futhi ushiye ubusuku. Ekuseni - thumba futhi umzila uthole abandayo.
Ithumba ngomunwe wakhe iphathwa, njengoba kuvela ku umkhuba, umane. Kodwa kukhona enye indawo lapho ithumba wesabeka ubuhlungu babulawa. Lokhu sezinsini. Thola ithumba izinsini ungaba umuntu. Futhi akuyona inkomba ukuthi umuntu nalesi sifo inobudlabha noma zingcolile, isikhathi ilethe ukutheleleka emlonyeni wakhe. Ithumba Gingival kungenzeka ngisho nangemva ukuxubha ibhulashi aseptically ahlanzekile. Ukwelapha ithumba emlonyeni kunzima kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi emlonyeni microflora zawo ezingabantu kanye ngamathe kuyinto nenqwaba bacterium namagciwane angadala futhi ukusekela ekwandeni eziphilayo ezithathelwanayo.
Nokho, ukwelapha ithumba izinsini ekhaya izosiza izindlela of imithi yendabuko. Eyisimangaliso kakhulu - esekelwe uju ukulibopha. Kaningi ngangokunokwenzeka kuyadingeka ukuze gcoba isilonda kanye endaweni ezungeze ke candied uju. Uma uju Akayisusi ukuvuvukala, kubalulekile iphendukele indlela yesibili, okuyinto engekho ngaphansi emangalisayo. Kufanele libe njalo ngemva kwamahora amabili soda kwesigaba nivame nge ithumba, futhi ngezikhathi - isixazululo soda ukususa ngalo ingaphakathi ngomlomo. Uma soda noma uju ukusabela iguliswa kwenzeka, kuzakuba khona brine kulokhu hashaza.
Futhi khumbula ukuthi zelapheka ithumba, ngesikhathi evele okokuqala, kunokuba uma kubangela ubuhlungu okungabekezeleleki.
Isibindi ukudabuka: Izimbangela, ukwelashwa, imiphumela futhi Izibikezelo
Iphuzu White phezu izindebe futhi hhayi kuphela lapho ...
Fibrosis - kuyini? cystic yamaphaphu. ukwelashwa cystic
Iziyaluyalu affective: izimpawu futhi izimpawu zezifo
Indlela amanzi okugqumisa salmon
Indlela ukuxhuma ithebhulethi yakho ku-TV usebenzisa i-HDMI
Stirlitz - ubani lo? biography
Biolaminirovanie Izinwele: ukubuyekezwa kanye ezicini ezinhle inqubo
Wishes ngoba umama evesini bese temibhalo yephrozi netindzaba
Luka plastic sanitary: Ubukhulu kanye nokuzikhethela ongakhetha
Indlela yokwenza kwesigidi kusuka ekuqaleni: ambalwa izindaba zangempela